Barlamanka oo Dood Ka Leh Maamulka Jubba. – SBC
Barlamanka oo Dood Ka Leh Maamulka Jubba.
Kulanka Barlamanka ee maanta ayaa waxaa looga dooday mooshin ka dhan ah Barlamanka Jubba oo toddobaadkii hore loo qeybiyay Xildhibaanada si ay usoo aqriyaan.
Ku dhowaad 38 Xildhibaan oo doonaya inay ka hadlaan ama ka doodaan qodobkaan ayaa is qoray, kuwaasi oo qaar ka mid ah soo bandhigay doodooda, hase ahaatee kuwa haray ayuu qorshahu yahay inay ka doodaan Kulanka soo socda ee Barlamanka.
Xildhibaano uu ka mid yahay, Xildhibaan Samaan Sheekh Maxamed oo ka hor aqriyay mooshinka Barlamanka ayaa sheegay in dhismaha Barlamanka Jubba uusan waafaqsaneyn Dastuurka iyo aan lagu saleyn deegaan iyo Dad intaba.
Hadii ay Barlamanka Soomaaliya u codeeyaan in uusan sharci aheyn Barlamanka Jubba, lama oga waxa taasi ay ka badali doonto dhismaha Barlamankaasi oo hadda ay ka taagan dood la xiriira in aan cadaalad lagu saleyn.